I-WhatsApp kunye noGoogle bajoyine imikhosi, iikopi zokugcina azizukusebenzisa | Iindaba zeGajethi
Izipele ze WhatsApp Ngaba ungumhlobo othembekileyo, sele sithethile kwiqela ngamanye amaxesha malunga kulula kangakanani ukwenza ukhuphelo lwe-WhatsApp en Google Drive kunye neminye imithombo yokugcina yangaphandle. Njengoko sisazi kakuhle, iiakhawunti ezininzi ezisimahla zikaGoogle Drayivu zinendawo yokugcina encinci ye-15 GB iyonke, ngamanye amaxesha sinokungabikho indawo eyoneleyo yokuncedisa isixhobo sakho se-Android. UGoogle kunye noWhatsApp basandula ukubhengeza umanyano oluza kusivumela ukuba sigcine i-WhatsApp ngokulondolozwa kuGoogle Drayivu ngaphandle kokuhlala kwindawo enesivumelwano.
Le yingxelo uGoogle ayenze esidlangalaleni ngokuthumela i-imeyile kubasebenzisi beDrive kwiiyure zokugqibela:
Enkosi kwisivumelwano esitsha phakathi kukaWhatsApp noGoogle, ii-backups zikaWhatsApp azisayi kuphinda zibalwe kwi-Google Drayivu yokugcina. Nangona kunjalo, ii-backups zikaWhatsApp ezingakhange zihlaziywe ngaphezulu konyaka ziya kususwa ngokuzenzekelayo kwiGoogle Drayivu.
Umgaqo-nkqubo uza kuqala ukusebenza kubo bonke abasebenzisi nge-12 kaNovemba ka-2018, kodwa abanye banokukwazi ukonwabela le nzuzo ngaphambi kwalo mhla. Ukuthintela ukuphulukana nee-backups zabo, sicebisa ukuba abasebenzisi benze ukhuphelo olusebenzayo lweWhatsApp ngaphambi kukaNovemba 12, 2018.
Ngamafutshane, Ukusukela nge-12 ka-Novemba kulo nyaka, ii-backups zikaWhatsApp azizukulinganiselwa okanye zithathe indawo yethu kuGoogle Drayivu, kodwa kufuneka silumke, kuba ukuba asizihlaziyi ikopi zokulondoloza ubuncinci kube kanye ngonyaka ziya kucinywa kwiserver yakho, kuba le yeyona nto ilungileyo kukucwangcisa ikopi yogcino rhoqo ngenyanga. Ubuncinci yindlela enomdla kakhulu yokugcina indawo kuGoogle Drayivu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-WhatsApp kunye noGoogle bajoyine imikhosi, i-backups ayizukuyisebenzisa